Iyadoo ciyaarta scratchcard this, ciyaartoyda waa inay riix 40 GEMS in ay arkaan on screen guriga. Marka aad riix badhanka play ah, tahay in aad guji kasta oo jawharad si aad u aragto mid kasta waxa uu leeyahay ciyaartoyda. Waxaa jira 4 miinooyinka la kala sooc lahayn ku qarsoon GEMS ah; haddii ciyaartoyda gujiso ka dibna ciyaarta dhakhso leh uu dhamaado. Dhinaca kale, haddii ciyaartoyda riix 36 GEMS aan gujinaya miinooyinka guul ka dibna ciyaaryahanka lagu siin doonaa.
gameplay ugu weyn ee kulankaan waa tiirsan GEMS in aad riix. Waa ciyaar fursad ku salaysan in uu ku xiran yahay nasiibkaaga, si loo hubiyo in aad guji diamond kasta oo daryeelka darafkii Waayo, waxaa jira qaar ka mid ah in laga yaabo ciyaarta idiin. Waxaa jira 40 GEMS ku screen iyo ciyaaryahanka in uu guji kasta si aad u aragto waxa uu leeyahay jawharad iyagii ciyaarta scratchcard Epic GEMS.
About sameeysa ee Epic GEMS
GEMS Epic ayaa la soo saaray by Gamevy taas oo ah mid ka mid ah sameeysa horseedka ciyaarta in industry ee iGaming, ay u abuuraan kulan la tayada iyo waa qeybiye shati in la abuuro kulan casino tayada ciyaartoyda inay ku raaxaystaan.
Sida loo ciyaaro? More on ciyaarta
Waxaa jira xeerar gaar ah in ciyaartoyda u baahan tahay in maskaxda lagu hayo halka ciyaaro Epic GEMS:
Ka hor inta aadan bilaabin ciyaarta, marka hore ciyaaryahanka uu u baahan yahay in uu sharad. Cabbirka bet ilaa xad badan oo go'aan ka qadarka badiyeen halkan ciyaaryahanka uu u baahan yahay in la doorto lacagta ugu fiican si caqli ah.
On shaashadda, qadar Ghanna ayaa la soo bandhigi doonaa, qadar Ghanna in uu yahay ciyaaryahanka lacagta ku guuleysan karto la bet uu meelaha
Waxaa jira 40 GEMS ciyaaryahanka in uu leeyahay in la qaban iyo 4 miinooyinka.
matoor jawharad ka mid yahay in ay muujiyaan doonaa haddii jawharad aad riixi on waa jawharad ama anigaa. Haddii ciyaaryahanka ay yeerto on jawharad in ay baabi'i doontaa, laakiin haddii uu yeerto on anigaa ah in ay dhammaan doonto ciyaarta oo dhan.
In kulanka scratchcard this, ciyaaryahanka ayaa fursad u ah inay lacago kaash baxay guuleystayna kasta. Waa ciyaar xiiso leh in qoreysa ah gameplay guul degdeg ah ciyaartoyda inuu ku guuleysto more.
Dhexgalin Epic GEMS at Coinfalls Casino oo bal arag waxa ciyaarta casino this ayaa aad u. ka hor Tag oo maanta ciyaaro kulanka casino this!